"दुई बर्षयता दुग्ध विकास संस्थान नाफामा सञ्चालित छ" | BUSINESS PATI | Economical Online News Portal
“दुई बर्षयता दुग्ध विकास संस्थान नाफामा सञ्चालित छ”
प्रबन्ध निर्देशक, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)
१) दुग्ध विकास संस्थानको वित्तिय स्वास्थ्य कस्तो रहेको छ ?
दुग्ध विकास संस्थान विगत दुई बर्षयता आर्थिक रुपले सवल छ । विगतमा निकै लामो अवधि घाटामा थियो संस्थान । अहिले चाँही दुग्ध विकास संस्थान नाफामा सञ्चालित छ । हामीले कृषकहरुलाई पनि निकै राम्रो किसिमको दुधको मुल्य दियौं । त्यसले गर्दा दुध संकलन वृद्धि भयो । र, त्यो संकलन वृद्धि भएपछि पाउडर र मख्खन प्रयोग गर्न भन्दा दुधैबाट डेरी उद्योगहरु सफल तवरले सञ्चालन हुन्छन् । त्यस हिसावले अहिलेको आर्थिक अवस्था संस्थानको राम्रो छ ।
२) घाटामा सञ्चालन हुदै आइरहेको संस्थालाई तपाइले नेतृत्व गर्दै–गर्दा व्यवस्थापनमा के कस्ता चुनौतीहरु पाउनु भयो ?
दुग्ध विकास संस्थानको मुख्य चुनौती भनेको दुधको जुन संकलन छ । त्यो नियमित हुनुपर्छ । त्यसमा दुग्द्य विकास संस्थानले नियमित दुद्य संकलन गर्न सकेन । कुनै–कुनै डेरी उद्योगहरुले नियमित रुपमा कच्चा दुध दिन सकेन भने त्यो चाँही नाफामा जाँदैन अथवा त्यसको आर्थिक अवस्था राम्रो हुदैन । नियमित रुपबाट बर्षभरी नै हामीले चाहिने दुध दिन नसक्नु एउटा यसको चुनौती रहेको छ । त्यसमा अहिले नेपाल सरकारले पनि यसबारेमा अलिकति टाइमिङ परिवर्तन गर्ने, पशुपालनमा पनि गाइपालनलाई नियमित र व्यवसायिक भयो भने दुध संकलन नियमित हुन्छ । अहिले हामीले हेर्दाखेरी अर्को दुधको गुणस्तर हाम्रो जुन स्रोतबाट दुध संकलन हुन्छ, हामीलाई गर्मी सिजनमा दुधको गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो परेको छ । त्यसकारण संस्थानले कृषकहरुसँग विभिन्न दुधको गुणस्तर सम्बन्धी तालिम दिने, कृषकलाई स्वच्छ दुध उत्पादन गर्न सजग गराउनु पर्ने आवश्यक छ । अव यो दुधको क्षेत्रमा भएको जुन एउटा प्रतिस्पर्धा छ । त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य किसिमको हुनुपर्छ । तर सफा प्रतिस्पर्धा अहिले छैन ।
३) जस्तो नीजि क्षेत्रका दुग्ध उत्पादन उद्योगहरुले डीडिसीलाई प्रस्पिर्धात्मक चुनौती दिएका देखिन्छ नी ?
प्रस्तिपर्धा त भइहाल्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा उद्योगहरुलाई पनि बेफाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्यकर हुनपर्छ । एउटा उधोगीले अर्को उधोगीलाई तल पार्ने हिसावबाट हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यौ भने त्यो कुनै पनि उधोगको लागि भलाई हुदैन । र, हामीले कलेक्टिभ रुपले दुधको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । र, बजारमा उपभोक्तालाई पठाउने हाम्रा दुग्धजन्य पदार्थ पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले जो स्टार्डड तोकको छ, त्यो अनुसार हुनुपर्छ । त्यसमा अव हामीले नीजि क्षेत्रलाई हामीसँग प्रतिस्पर्धामा आयो भनेर अन्यथा लिँदैनौ । हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दुग्ध विकास संस्थानको जो अहिलेसम्मको शाख छ त्यो कायम गर्नका लागि अरु कम्पनीको भन्दा हाम्रो सामान सही छ भन्ने हिसावले जानुपर्छ भन्ने छ ।
४) जस्तो उत्पादन बढाउने, बजार विस्तार गर्ने र अरु किसिमका दुधजन्य वस्तु विकास गर्नेमा संस्थानको के कस्तो योजना छन ?
हामीले दुधलाई विविधिकरण गर्ने सोच बनाएका छौ । दुधलाई पनि एउटा लो फयाट दुध गरेका छौ । अर्को दहीलाई पनि हामीले विविधिकरण गरेका छौ । यसको व्यापार वृद्धि गर्नका लागि र किसानलाई पनि नजिक राख्नु पर्छ भन्ने सोच अनुसार हामीले हेटौडामा त्यही अनुसार काम थालेका छौ । विराटनरगमा धुलो दुध कारखानालाई हामीले विस्तार गर्दैछौ । त्यसको काम भइरहेको छ । र, हामीसँग भएका पुराना गाडीहरु जो छन् त्यसलाई विस्तापित गर्नै पर्ने, मिसिनहरुलाई पनि मर्मत गर्ने, नयाँ लगानी गर्ने कुरामा पनि हामीले विगत सालहरु भन्दा यसपाली त्यो काममा पनि संग्लन भएर काम गरिरहेका छौ ।
५) अन्त्यमा, समग्र दुग्द्यजन्य पर्दाथहरुको उत्पादन बढाउन, बजारको अभाव कम गर्न के गर्न पर्ला ?
मुख्य कुरा के हो भने हामीले उपभोक्ताबाट जो विश्वास लिएका छौ । त्यो विश्वास लिएको कारणले गर्दाखेरी उपभोक्ताको माग अनुसार हाम्रो सामान उपभोक्क्ताहरुको माझमा पुग्नसक्छ । हामीले सरलताका साथ उपभोक्क्तामा वस्तुहरु समयमा पुराउनु पर्छ । यी सबै कुराहरु सस्था सञ्चालनका क्रममा ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको अलवा हामीले दुधको जो सिजनल संकलन हुन्छ । ६ महिना हामीलाई चाँहीने भन्दा ५० प्रतिशत बढी र ६ महिनामा ५० प्रतिशत नै कम हुन्छ । यसको लागि हामीले दुधलाई संरक्षण गरेर धुलो दुधमा परिणत गर्छौ । र, त्यो धुलो दुध र मख्खन हामीले बढी भएको वेला धुलो दुधमा मख्खन बनाएर राख्नु पर्छ । त्यो चाँही कम भएको बेला हामीले धुलो दुधमा मख्खन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले लागेका छौ । त्यो गर्दाखेरी फाइदा के छ भने हामीले यदी दुध बजारलाई राख्नु पर्दाखेरी दुधैबाट पुगेन भने अथवा हाम्रो उत्पादनबाट पुगेन भने केही एड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीले विगत दुइ बर्ष यता दुधमा पाउडर वा मख्खन केही मिसाएका छैनौ । यो हिसावबाट हामीले रणनीतिगत रुपमा अघाडी जानुपर्छ भन्ने अनुसार काम गरिरहेका छौ ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम/जर्नादन उपाध्यय
प्रकासित मिति :२०७३–१२–१८
यी २३ डेरीको दूधमा भेटियो हानिकारक जीवाणु
४२ ब्रान्डमध्ये ४० डेरी उद्योगमा सोडा, ती कुन-कुन हुन् ?